Maxaa miisaan u ah xugunka sinada? – Maandoon
July 25, 2018 Abdalla Aw Hassan
Dadku sinada waxay u yaqaaniin inay isu tagaan laba qof oo aan la isku meherin, taasoo ka dhigan in loo maleeyey in sinadu tahay wax ku saabsan galmada oo keiya, waxaa kale oo sii dheer in loo haysto in sinadu tahay denbi ilaahay laga galay oo aan la cafin karin, labadaa qodobna waxay keeneen in xugunka sinada loogu camal falo si ka duwan sidii laga rabey. Haddaba waxaan maqaalkan ku eegaynaa sida uu ku yimid xugunka sinadu.
Guud ahaan maalka iyo guurku waa 2 shay oo asal ahaan xalaal ah, waana 2 shay oo mid waliba ku saabsan yahay mucaamalo ka dhaxaysa aadanaha. Sidaa darteed wuxuu mid waliba xaaraan noqdaa haddii aan la ilaalin sharuudda ay dadku ku macaamilaan. Shuruuddaasna waxaa ka mida in qofka loo idmo wixi maal ah ama guura sida in qofka maal la siiyo ama la daymiyo ama gabar lagu meheriyo, waxaana taa cagsi ku ah in qofku maal iska qaato isaga oo aan loo idmin ama inuu gabar u tago isaga oo aan lagu meherin. Qofkuna markuu gudayo waxa lagu leeyahay ma kala duwana waxa uu bixinayo haddii loo idmay iyo haddii kaleba. Matalan haddii qof uu xoogo 100$ iyo haddii la daymiyo mar walba waxaa laga rabaa 100 doolar oo keliya, laakiin waxay ku kala duwan yihiin dayntu waa wax qofka loo idmay sidaa darteed haddii uuna hayn ma loo ciqaabayo, laakiin marka uu maalka xoog ku qaatay waxaa bannaan in loo ciqaabo sida in la xiro haddii uuna maalka soo celin ama aan la cafin. Sidoo kale waxay galmadu idan la’aan noqotaa haddii ninku u tago gabar aan loo meherin ama mid aan u bannaanayn sida mid la qabo ama mid ay qaraabo dhow yihiin. Marka aan meel iska dhigno waxyaalaha aan guurka soo gelin sida 2 nin, 2 dumara iwm. Nin iyo naag markay isu tagaannna waxaa wax lagu yeeshaa ninka, waxa lagu yeelanayana waa wax is le’eg haddii gabadha lagu meheriyey iyo haddi uu kufsadayba, laakiin waxay ku kala duwan yihiin inay bannaan tahay in la ciqaabo marka uu kufsiga sameeyey hadi uuna bixin wixi lagu lahaa ama aan la cafin. Sidoo kale way kala duwan tahay marka ay gabadhu tahay mid uur qaadi karta iyo marka kale, maxaa yeelay marka ay uur qaadi karto waxay tirsan ciddo sidaa darteed ninka waxaa lagu yeelan muddada ciddada oo ah 90 beri haddi ayna gabadhu caado helin, hadi ay caado heshana 100 maalin maxaa yeelay waxay tirsanaysaa 4 caado iyo 3 daahir, haddiise ay tahay gabar aan uur qaadi karin sida mid yar ama mid uur leh waxaa la qiimaynayaa wixii dhib ah ee gabadha gaadhay.
Sidaa darteed sinada waxaa ka dhasha in maal la isku yeesho maxaa yeelay haddii gabar aan la qabin loo tago iyada ayaa ninka wax ku yeelanaysa, haddii mid la qabo loo tagana ninkeeda ayaa wax yeelan kara, maxaa yeelay gabadhu waxay biil ku leedahay ninka ay ciddada u tirsanayso sidaa darteed iyadoo nin labaad ciddo u tirsanaysa haddii ay ninkeeda biil ka qaadato way celin wixi ay qaadatay, haddii ayna cellina waxaa bannaan in la ciqaabo iyada iyo ninkii u tegeyba haddii aan la cafin. Sidaa darteed waa kala xugun gabadha la qabo iyo midda aan la qabin, maxaa yeelay midda aan la qabin iyada ayaa xaq leh mar kasta sidaa darteed iyada cidi ciqaab kuma laha laakiin waxay qasaari kartaa wixi ay ninka ku lahayd haddii ay oggolaato nin aan wax haysan. Sidaa darteed dumarka la yiri ha lagu dhufto 100 ka jeedal waa kuwa la qabo, taasoo daliil u ah inaan xugunka rajmigu (dhagax ku dilku) ahayn mid sax ah, 100 kuna waa muddada ciddada, taasoo ka dhigan inay celinayso biilkii ay ninkeeda ka qaadatay muddada ay ninka danbe ciddadiisa ku jirto, haddii ayna celinna loogu bedelayo 100 jeedal haddii aan la cafin. Haddii gabadha denbiga lala wadaagana waxaa ciqaabta la qaybsanaya ninka ka sinaystay, wuxuuna midkiiba yeelanayaa 50 jeedal hadi ayna bixin wixi qarasha ee lagu yeesho ama aan la cafin, sidaa darteed denbiga sinadu maaha denbi ilaahay laga galay ee waa denbi dadka dhexdiisa ah, taasoo keenaysa in la isu cafin karo. Culumada ku camal falay xugunka rajmigana waxaa ka qarsoomay xugunkii ku yaallay quraanka maxaa yeelay waxay u maleeyeen inaan dadka guurka soo maray xugunkooda quraanka lagu sheegin, rajmintana waxay u qaateen dil maxaa yeelay rajmintu waa in qofka dhagax lagu tuurtuuro waxayna noqon kartaa mid dil ah iyo mid aan dil ahayn, sidaa darteed quraanka iyo xadiiska waa la is waafajin karaa maxaa yeelay 100 dhagax oo yar yar oo qofka lagu tuuro waxay u dhigantaa 100 jeedal, sidaa darteed qolada u qaadatay rajminta dilka waa laga saxan yahay.
Waxaa laga yaabaa in dadka qaarkii ku kadsoomaan in xugunka rajmiga dad lagu fuliyey intii nebigu csw noolaa. Xugunka rajmigu inuu qaldan yahay way caddahay maxaa yeelay xugun cad oo quraanka ku yaal ayuu ka hor imanayaa, culimaduna iyagaaba shuruudda xadiiska ku daray in xadiiskii khilaafa nas ka xoog badan inuu daciif yahay, quraankuna waa nas ka xoog badan xadiiska, in culimadu ku camal fasho rajmigana waxaa u sababa 2 arrin oo kala ah: 1): xugunka sinada ee quraanka lu yaalay oo ka qarsoomay. 2): inay xugunka rajmiga ee la yiri waa la fuliyey waqtigii nebiga csw ugu camal faleen sidii xugun aan ijtihaad geli Karin.
← Cusboonowga Casriga
Horta koobka bannayso! →
December 5, 2018 Othman Abdirahman Comments Off on Halaaggii Dhacay Looma Kala Harin!